Admin – Page2– TajaNepal
बहसApril 17, 2018
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग जोडिएको र सरकारका नयाँ योजनाहरूको तर्जुमा गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा को आउला ? नेकपा एमालेले डा. पुष्प कँडेलको नाम फालेको छ । तर उनी सङ्घीयताविरोधी भएकाले सङ्घीय संरचनामा कँडेल जस्ता…
कार्यदलको ढिलाइले बढायो शङ्का काठमाडौँ । कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएकै दिन मे २२ अर्थात् वैशाख ९ गते नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेका बीचमा पार्टी एकता हुन्छ ? समानता नीति, सिद्धान्त, कार्यक्रम मिलेका दलहरूका बीचमा…
काठमाडौँ । सरकारले यस पटक नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको आईजीपीमा सङ्गठनका वरिष्ठ अधिकृतहरूलाई नियुक्त गरेको छ । विगतमा सशस्त्रमा वरिष्ठता र जेष्ठतालाई दायाँ–बायाँ गरिएको छैन र राजनीतिक हस्तक्षेप भएको पनि छैन । तर नेपाल…
काठमाडौँ । सम्मानित सर्वोच्च अदालत अहिले एकपछि अर्को बदनाम हुँदैछ । भ्रष्टाचार सर्वोच्चको श्रीपेच नै भयो । उमेर ढाँटेर प्रधानन्यायाधीश भएका गोपाल पराजुलीलाई हैरान पारिएकै बेला अर्का पूर्वन्यायाधीशले प्रयोग गरिरहेको सरकारी गाडी खोसेर सर्वोच्च अदालतका…
काठमाडौँ । भारतमा काँग्रेस आईबाट छुट्टिएर भारतीय जनता पार्टी खडा गर्दा लालकृष्णा आडवाणी र भगतसिंह कोसियारीहरूले बहुमत प्राप्त सत्ता प्राप्त होला भन्ने सोचेनन् । हिन्दू धर्मको झन्ड उठाउँदै भाजपाले भारतमा अनेक ताण्डव देखायो । नेपालको…
बहसApril 15, 2018
काठमाडौं । “मेरो धरहरा मै बनाउँछु” अभियानलाई सफल पारौं भन्दै धरहराका स्थानियबासीहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दशौं हजारको हस्ताक्षरसहित ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी सचिव उपसिचव युवराज दाहाललाई उक्त ज्ञापनपत्र…
यस्तो छ, हवाइएन गितारको इतिहास
आर्थिकApril 13, 2018
– ईश्वर जोशी, (हवाइएन गितारमा प्रवीण) – स्पेनिस र इलेक्ट्रिक गितार भन्दा पूर्णरूपमा फरक तरिकाबाट बजाइने, यो हवाइएन गितारलाई पूरा काखमा सुताएर, दायाँ हातको चोर, माझी र बूढीऔँलामा विशेष खालको औँठी लगाएर बायाँ हातमा…